Gudiga Doorashooyinka oo Muqdisho uga yeeray Xubnaha ku soo baxay Doorashada Labada aqal | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gudiga Doorashooyinka oo Muqdisho uga yeeray Xubnaha ku soo baxay Doorashada Labada aqal
Warsaxaafadeed ka soobaxay Gudiga Doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in xubnaha ku soobaxay aqalka Sare iyo kan Hoose intaba in ay soo gaaraan Muqdisho sid loo siiyo Shahaadada aqoonsiga ee Xildhibaanimo.
Halkaan Hoose Ka akhriso Warsaxaafadeedka.
Mogadishu, Somalia 29 Nofeember 2016
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashada Dadban (GFHDD) waxuu shaacinayaa in uu bilaabayo bixinta shahaadada xildhibaannimo oo la siin doono xildhibaanadda ku gulaystay doorashooyinka Aqalka Sare iyo Golaha shacabka.
Waxaa dhamaan xildhibaanada la doortay ilaa iyo hadda lagu wargelinayaa inay lasoo xiriiraan xarunta Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashada Dadban ee magaalada Muqdisho inta u dhaxeysa 30ka Nofeembar ilaa 4ta Deseembar 2016ka si ay u qaataan shahaadada cadeyneysa xildhibaanimadooda.
GFHDD wuxuu shahaadada siin doonaa keliya xildhaabanada labada gole oo aysan wax dacwad ah oo la xariirta hannaanka lagu doortay ka oolin Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban (GXKHDD). Labada guddi ayaa isla asteyn doona kuraasta dacwada ka taal ee bixinta shahaadooyinkooda dib loo dhigi doono inta go’aan laga gaarayo dacwadahaas.